20 Munamato Unopesana neMweya wekusvibisa | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 20 Munamato Unopesana neMweya wekusvibisa
20 Munamato Unopesana neMweya wekusvibisa
VaGaratiya 5: 19-21:
19 Zvino mabasa enyama anoonekwa, aya ndeaya; Upombwe, ufeve, kusachena, kunyadza, 20 Kunamata zvifananidzo, uroyi, kuvenga, kusawirirana, kutsamwa, kutsamwa, gakava, kupanduka, dzidziso dzenhema, 21 godo, umhondi, udhakwa, uye ndakakuudza zvekare, kuti avo vanoita zvakadai havangagari nhaka yeushe hwaMwari.
Kusvibiswa pamweya ndiko madhimoni ekupedzisa nguva nzira yekuodza vatendi. Dhiabhori anoziva kuti kana achikanganisa pfungwa, muviri wake unotevera. Semwana waMwari, unofanirwa kuchengetedza pfungwa dzako nekushingaira kose, iwe unofanirwa kuve mudzidzi weshoko raMwari uye tendera kuti izwi ra Kristu rigare zvakanaka mukati mako. Nhasi tichave tichiita 20 Munamato wekurwisa mweya wekusvibiswa. Kusvibisa chinhu kuita kuti ive yakasviba uye isingawanike. Kusvibiswa kunongoreva kusviba kwemweya nemuviri. Kana iwe wasvibiswa, haugone kushanda zvakanaka mumba maMwari. Vatendi vazhinji havana kusaziva akadzokera kumashure kubva kuchechi nekuda kwekusvibiswa. Vanoona sekuti pane tsvina yemweya haigone kubvumidzwa naMwari.
Dhiabhori anosvibisa kuburikidza nezvivi, kana achikuyedza kuti utadze uye iwe ukawira pachiri, muviri wako wakasvibiswa. Asi nhasi tinenge tichipikisana nadhiyabhori, tinenge tichiti zvakwana, tinofanira kuramba kubvumira dhiabhori kuti atisvibise nezvivi zvakare. Tiri kurwisa dhiabhori tichishandisa munamato uyu kurwisa mweya wekusvibisa. Paunenge uchiisa munamato uyu, chibatanidze pamwe nekutenda kune chako chaunoda kutendeuka. Handizive chivi chiri kukusvibisa nhasi, asi paunenge uchiisa minamato iyi nhasi, uchasunungurwa muzita raJesu.
1. Ini ndinosiya mweya wega wekusvibiswa muzita raJesu.
2. Ndinozvisunungura kubva kumweya yese yekusvibisa, zvinobva muzvitadzo zvekare zveupombwe nehupombwe, muzita raJesu.
3. Ndinozvisunungura kubva mukusvibisa kwese kwemadzitateguru, muzita raJesu.
4. Ndinozvisunungura kubva pakushatisa kwese kwekurota, muzita raJesu.
5. Ndinoraira munda wese wounzenza muhupenyu hwangu, buda nemidzi yako yese, muzita raJesu.
6. Dhimoni roga roga rinoshatisa hupenyu hwangu, rakaremara uye ibva muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
7. Dhimoni rega rega rekushatiswa rakapihwa hupenyu hwangu, ngwarive, muzita raJesu.
8. Baba ishe, regai simba remweya wekusvibisa richidzvinyirira hupenyu hwangu riwane moto waMwari uye roast, muzita raJesu.
9. Wese wedhimoni dhimoni rekusvibisa gamuchira miseve yemoto, muzita raJesu.
10. Chese simba romweya wemweya wekusvibisa huya uzvirwire, muzita rakasimba raJesu
11. Baba ishe, dhimoni roga roga, rakavakwa muhupenyu hwangu nemweya yetsvina, ngaridzikiswe pasi, muzita raJesu.
12. Simba roga roga remweya wetsvina iro rakabata hupenyu hwangu, riputsanye kuita zvidimbu, muzita raJesu.
13. Mweya wangu, nunurwa kubva kumasimba akasvibisa muzita raJesu.
14.Ishe Mwari waEria, simuka neruoko rune ruoko rwakasimba kumweya yese murume / mukadzi uye nesimba rekusvibiswa muzita raJesu.
15. Ini ndinotyora kubatwa kwesimba ripi neripi rakaipa pamusoro pehupenyu hwangu, muzita raJesu.
16. Ini ndinobvisa zvese zvinoitika pakuruma kwembwa pahupenyu hwangu, muzita raJesu.
17. Wese muenzi akashata uye satanic amana muhupenyu hwangu ngaafe mitezo uye ubude muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
18. Mweya Mutsvene moto, suka hupenyu hwangu zvachose, muzita raJesu.
19. Ndinoti kusunungurwa kwangu kuzere kubva kumweya weupombwe nehupombwe, muzita raJesu.
20. Meso angu, nunurwa kubva mukuchiva, muzita raJesu.
Ndatenda baba nekununurwa kwangu muzita raJesu.
Previous nyaya20 Hondo yemweya minamato inopesana nemweya wekunonoka nekushushikana
inoteveraInokurudzira Inamato yeMangwanani
יערה Chivabvu 1, 2021 nenguva dza 6:40 pm
Pfungwa dzeMunamato Kune Vakristu Vakashandurwa Nyowani
22 Mavhesi eBhaibheri nezvekupa chegumi uye kupa
Kuverenga kwemazuva ese bhaibheri kwanhasi October Gumiguru 16